रडाकोको अर्को नाम प्रेस चौतारी : अध्यक्ष र महासचिवबीच जुहारी | Axiskhabar
माघ १६, २०७८, १:०५ AM
काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले आज दिउँसो २ बजे आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमलाई लिएर त्यसका अध्यक्ष र महासचिवबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ । अध्यक्ष गणेश बस्नेतले महासचिव राजेश राईको घोषणा भन्दै स्टाटस लेखेपछि चौतारीभित्रको रडाको छताछुल्ल भएको हो ।
बस्नेत एक्लैको निर्णयमा आज दिउँसो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएपछि राईले त्यस्तो कार्यक्रम सल्लाहमा गरिएको भए राम्रो हुने सुझाव दिएको बताएका छन् । तर, राईले आफूलाई राति फोन गरेर मनपरी गाली गरेको बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
महासचिवले आफूलाई गाली गरेको भन्दै बस्नेतले लेखेका छन्, ‘गणेश बस्नेत तँ एमाले र केपी ओलीको दलाल रहिछस्, म महासचिव हुँ, म त प्रचण्ड, जुगल र योगेशको खास मान्छे हुँ । तँ केपी ओली र एमालेको खास मान्छे रहिछस् । अब मलाई केही नभन्नु, म प्रेस चौतारीको नाममा केही पनि गर्न दिन्न । म त माधव नेपालको खास मान्छे हुँ बुझिस् । माधव कमरेडले तेराे संगठन सकाउन मलाई पठाएको हो ।’
तर, बस्नेतको उक्त स्टाटसपछि केहीले लेखेका कमेन्ट्स यस्ता छन् । ज्ञानेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘यस्ता वाहियात कुरा कम्तिमा सामाजिक सञ्जालमा नलेखौं, के लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भइसक्यो । अझ राति त तपाईंले केही नलेख्नु ।’ एमाले केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी जीएमले लेखेकी छन्, ‘यति होस गुमाएर बोल्ने मान्छे त लाग्दैन मलाई राजेश राई । समस्या भए बरु बसेर समाधान खोज्दा उत्तम हुन्छ । तर दुनियाँ नहसाम् है !’
‘साँझ पर्नै नहुने ! पेटमा पुग्यो कि बमिट शुरु !! जात्रा हेरम् मजा हुन्छ !!,’ भनेर गणेश पौडेलले लेखेका छन् । नवराज कट्टेलको कमेन्टसमा भनिएको छ, ‘पुनः अध्यक्ष हुनुछ गणेश बस्नेतलाई अनि नङ्गाइ खानुपर्ने राजेश राईले । सोसाईटीले सुन र घुन छुट्याएका हुन्छन् । पिउँदा पनि रक्सी नै पिउनु नि, रक्सी बनाउने कच्चापदार्थ हैन ।’
गणेश बस्नेतको उक्त स्टाटसपछि महासचिव राईले राति नै आफू अचम्भित भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले घटनाक्रम स्पष्ट पार्दै लेखेका छन्, ‘भर्खरै हाम्रो प्रिय तथा गौरवशाली संगठनका अध्यक्ष कमरेड गणेश बस्नेतको स्टाटस पढेँ । म बढो अचम्भित भएको छु ।’
उनले घटनाक्रमको बेलिबिस्तार लगाउँदै भनेका छन्, ‘अघि १० बजेर ४ मिनेट जाँदा उहाँसँग ३ मिनेट संवाद भएको थियो । विषय थियो भोलिको कार्यक्रम । भोलि अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको कुरो फेसबुकतिर हेरेँ । म पनि महासचिव हुँ । यसो थाहा दिए हुने थियो नि अध्यक्षज्यू ।’
Previous articleजेठ मशान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको सुझाव
Next articleआज माघ १६ देशभरी सहिद दिवस मनाइदै